Sheekh Shakuul: “Waa in laga feejignaadaa rabshado lagu boobo Hantida Soomaalida kaddib xukunka ICJ”. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Sheekh Shakuul: “Waa in laga feejignaadaa rabshado lagu boobo Hantida Soomaalida kaddib...
Sheekh Shakuul: “Waa in laga feejignaadaa rabshado lagu boobo Hantida Soomaalida kaddib xukunka ICJ”.
Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo kamid ah Ganacsatada Soomaalida Kenya oo la hadlay VOA ayaa ka digay in dibadbaxyo ay ka dhacaan Magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Islii kaddib xukunka Maxkamadda ICJ.
Sababta waxa uu ku sheegay in Soomaalida Kenya joogta qayb kamid ah ay taageersan tahay in Soomaaliya loo rido xukunka halka qaar kale ay daneynayaan in dhinaca Kenya loo go’aamiyo, taasina ay ka dhalan karto isku dhac sida uu hadalka u dhigay.
“Dareenka Cabsida ah waxa uu dhashay kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in daraf kamid ah Soomaalida Islii joogta in ay u dabbaaldegayaan haddii dacwadda Badda Soomaaliya loo xukumo halka ay jiraan dad kale oo kasoo horjeeda” ayuu yiri Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul.
Waa uu sii hadlay Sheekh Maxamed Shakuul waxaana uu soo jeediyay in laga fogaado wax weliba oo abuuri kara rabsho keeni karta in la dhibaateeyo Dadka Soomaalida & Hantidooda sida uu hadalka u dhigay.
“Xaqiiqdii waa in laga feejignaadaa falcelin weliba oo ka dhalan karta go’aanta Maxkamadda iyada oo laga fikirayo naftada & hantida taal, Xaafadda isku raranta ah ee saaran islii waxaa ku sugan burcad ka faaiideysan karta khalalaase weliba oo dhaca, xitaa ciidanka ayaa dadka boobi kara” ayuu yiri Sheekh Shakuul.
Previous articleGolaha Midowga Musharaxiinta oo war kasoo saaray dib u dhaca ku yimid doorashada dalka
Next articleMaxkamada ICJ oo Maanta ku dhawaaqeysa Natiijada Kiiska Dacwada Badda ee dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya